आन्दोलनको प्रतिकारले देखाएको संकेत « नेपाली मुटु
« अब आतकंकारी भन्न मात्र बाँकी छ
यो आन्दोलन, सपना र मेरा नजर »
आन्दोलनको प्रतिकारले देखाएको संकेत
आज एकिकृत ने.क.पा.(माओबादी)को आमहडतालको पाँचौ दिन । हिजो सम्म आन्दोलनमा जुन शान्ति थियो त्यो अब धेरै हदसम्म बद्लिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा हडतालको ‘प्रतिरोध र प्रतिकार’ भन्दै झडपको सृजना गरिएकोे छ । यसबाट घाइतेको संख्या र जनमानसमा आक्रोस बढ्न थालेको छ । र, भर्खरै ए.माओबादीको स्थायी समितीको बैठक सकिएको छ । यो बैठकको निर्णयले अझ सन्त्रास थपेको छ । लौ ! अब के हुने हो भन्ने डरले नागरिकको मन ढक्क फुलेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार पक्षिय दलहरु आफ्ना युवा संगठनलाई ‘प्रतिकार’का लागि उक्साइरहेका छन् । यसले पक्कै पनि नेपाली मनको शान्तिको चाहनालाई साकार पार्न सक्दैन । माओबादीको प्रतिकारको बिरुद्धमा डटेर लड्ने उदघोसले नेपालको आकाशमा भयको कालो बादल अझ घनिभुत भएको छ । यसलाई रोक्न कुनै पहल नगर्नु सरकारको शुन्यता र सत्तारूढ़ दलको अशफलता बाहेक केहि होइन ।
एउटा सानो ठाउँबाट सुरु भएको ‘प्रतिकार’ बिस्तारै देश भरि फैलिन थालेको छ । बिरगञ्जमा स्थिती नियन्त्रण बाहिर गएर कफ्र्यु लगाउँने वातावरण बनिसक्यो । राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाँउहरुमा तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ । राजधानीका बुढानीलकण्ठ, बौद्ध, जोरपाटी, गल्फुटार, कपन लगायतका क्षेत्र तनावग्रस्त भएको छ । बुढानीलकण्ठमा प्रतिकारमा उत्रने र माओवादीबीच झडपको स्थिति श्रृजना भएपछि प्रहरीले पाँच राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । दुई पक्षलाई आमनेसामने हुन नदिन त्यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । ढुंगा हानाहानको क्रममा स्थानीय बासिन्दा नौ बर्षीय वालक रोशन मगर घाइते भएका छन् । माओवादी प्रर्दशनकारीको संख्या थपिदै जाँदा प्रतिकारमा उत्रने तितरवितर भएका थिए ।यो अझै कति लामो सुचीमा लम्बिन्छ कसैले आंकलन गर्न सक्ने स्थिती छैन । झडपको स्थिती बढेर नियन्त्रण बाहिर गए यो आन्दोलनकारी र सत्तारुढदल दुबैका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित प्राय छ ।
सरकार भनेको बिधी हो । सरकारले सँधै बिधी र नियमानुसार शासन र दमन गर्नु पर्छ । अझ लोकतान्त्रिक पद्धतीमा त यो अलग गर्न नसकिने हुन्छ । हाम्रा सत्तारुढ दलहरु जसमा आफु मात्र लोकतन्त्रको ठेकेदार हौ भन्ने अहम् छ उनीहरुबाट नै ‘प्रतिकार’ र ‘प्रतिरोध’को छद्म रुप देखिनु उनीहरुको आदर्श माथिकै बलात्कार हो । सुरक्षाका लागि प्रहरी र प्रशासनलाई ओझेल पार्ने गरी निस्किएका सत्तारुढ दलका भातृसंगठनहरु आन्दोलनकारी भन्दा कुन हदमा फरक छन् ? प्रश्न जटिल छ । आन्दोलनकारी असंयम हुनु पर्ने स्थितीमा सरकारमा बसेको संयमहिनता र गैर–जिम्मेदारीले आखिरमा आन्दोलनकारीलाई नै नैतिकबल पुग्ने निश्चित छ । कथित प्रतिकारको घटना नभएको समयसम्म र नभएको स्थानमा अहिले पनि आन्दोलनकारीहरु एकदमै अनुशासित र लोकतान्त्रिक भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसैले समय रहदै संयमित भएर सरकारले आन्दोलनलाई टुङ्गो लगाउँनु नै बुद्धिमता हुनेछ ।
This entry was posted on May 6, 2010 at 2:39 pm	and is filed under चुप लाग्न नसक्दा. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.